FANDRAISANA NY TAONA VAOVAO :: Sambany hisoratra amin’ny Teny malagasy ny « Coca-Cola » • AoRaha
FANDRAISANA NY TAONA VAOVAO Sambany hisoratra amin’ny Teny malagasy ny « Coca-Cola »
Zava-pisotro efa nisy hatramin’ny taona 1953. Tazana hatrany amin’ny fiarahan’ny mpianakavy rehefa andro fety ny zava- pisotro, ary ao anatin’izany ny « Coca-Cola ». Sambany hiteny gasy ity zava-pisotro ity hatramin’ny nahatongavany teto Madagasikara. Niova mantsy ny sary eo amin’ny fonon’ny tavoahangy, izay misy hafatra amin’ny Teny malagasy.
Manomboka izao ka hatramin’ny faran’ny volana febroary dia handravaka ny tavoahangin’ity zava-pisotro ity ny hafatra hoe « Tratry ny taona 2019 », « Tonga soa 2019 » ary « Feno fifaliana 2019 ».
Mifanandrify amin’izany dia misy ny lalao “Coca-cola Collector” karakarain’ny orinasa Star, ahazoan’ny olona telo tsara vintana fikarakarana fety ho azy ka afaka hanasany olona dimampolo. Fakàna sary miaraka amin’ny tavoahangy telo misy ireo hafatra telo samihafa miaraka amin’ny olona akaiky, namana na fianakaviana ny fepetra voalohany ahafahana mandray anjara amin’ny fifaninanana. Mitohy amin’ ny fandefasana ny sary ao amin’ny pejy “Facebook”-ny Star.
Ny 27 janoary ka hatramin’ny 14 febroary no hanaovana ny fisarihana ho an’ireo tsara vintana ka hahazo ireo loka telo ireo. Tafiditra ao anatin’ny loka ihany koa ny fahafahana miantso mpanakanto araka ny tolotra homen’ny mpikarakara.
ZAVAKANTO SY FANDRAHARAHANA :: Manaitra ny aingam-pamoronan’ ny tanora ny « M’koloproject »